China Metal Stamping orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | firaka
Wuxi Lead metal stamping service dia manambatra ny zavatra niainan'ireo mpanamboatra fitaovana anay sy ny fanoloran-tenanay ho an'ny kalitao hamokarana ireo faritra azo ianteherana amin'ny fenitry ny mpanjifanay. Fampiasana fitaovana mandroso sy fitaovana faharoa hamokarana ampahany kely sy lehibe
Wuxi Lead metal stamping service dia manambatra ny zavatra niainan'ireo mpanamboatra fitaovana anay sy ny fanoloran-tenanay ho an'ny kalitao hamokarana ireo faritra azo ianteherana amin'ny fenitry ny mpanjifanay. Amin'ny fampiasana fitaovana mandroso sy fitaovana faharoa hamokarana ampahany kely sy lehibe, afaka manolotra fihodinana haingana amin'ny prototypes sy ny famokarana izahay.
Ny fametahana metaly dia dingan'ny famokarana ampiasaina hanovana ireo takelaka metaly fisaka ho endrika manokana. Izy io dia dingana sarotra iray izay mety ahitana teknika fananganana metaly maromaro - fanosorana, fikapohana, famoritana ary fanindrohana, raha tsy hitonona afa-tsy vitsivitsy.
Ny fametahana metaly dia dingana mamorona mangatsiaka izay mampiasa ny maty sy ny fametahana fametahana mba hanovana ny vy amin'ny endriny samihafa. Ny sombin-taratasy metaly fisaka, izay antsoina matetika hoe banga, dia ampidirina ao anaty milina fanitso vita amin'ny vy izay mampiasa fitaovana sy maty mba hamoronana ilay metaly ho endrika vaovao. Ny fotodrafitrasa famokarana sy ny mpanamboatra metaly manolotra serivisy fitombenana dia mametraka ny fitaovana hamehezana eo anelanelan'ny faritra maty, izay ampiasana ny endrika tsindry ary manety ilay fitaovana ao amin'ny endrika farany irina ho an'ny vokatra na singa.
Manolotra serivisy fitomboka vy izahay handefasana singa ho an'ny indostria amin'ny fiara mandeha amin'ny fiara, aérospace, fitsaboana, ary tsena hafa. Rehefa mivoatra ny tsena manerantany dia ilaina ny fitomboan'ny ampahany sarotra be hamokatra haingana.
Ny fametahana vy dia vahaolana haingana sy mora vidy ho an'ity filan'ny orinasa mpamokatra entana be ity. Ireo mpanamboatra mila kojakoja metaly nasiana tombo-kase ho an'ny tetikasa amin'ny ankapobeny dia mitady toetra telo lehibe:
Aluminium, vy, vy vy, varahina, varahina, vy ambany karbaona, sns
Manomboka amin'ny prototypes tokana ka hatramin'ny volavola amin'ny ampahany an'arivony tapitrisa isan-taona.
Machining CNC, Fikosoham-bary, Fihodinana CNC, Vy metaly, Vita, Fitaovana, sns
Manaraka: Sheet Metal